Sony waxay saxiixday rubuckeedii ugu xumaa xagga iibka | Androidsis
Sony waxay saxiixday iibkeedii ugu xumaa rubuc hore
Eder Ferreno | | Mobiles, Sony
Waxaan ognahay muddo dheer taas xaaladda qaybta taleefanka ee Sony ma ahan tan ugu fiican. Sannadkii 2018, sumadda Japan waxay dunida oo dhan ka iibisay 6,5 milyan oo taleefanno ah Tani waa tiradii ugu hooseysay illaa iyo hadda, ka tarjumid wanaagsan oo astaanta hoos u dhacday suuqa sanadihii la soo dhaafay. Bilowgii sanadkan isbeddelada shirkadda horay ayaa loo shaaciyey, iyada oo dib loo abaabulayo qaybaheeda.
Iyada oo ay taasi jirto, iibinta shirkaddu ma ahan kuwa ugu wanaagsan bilowga sanadka. Intaa waxaa dheer, maalmo ka hor ayaa la xaqiijiyay in Sony ay aadeyso jooji iibinta taleefannada Latin Amerika. Hadda, waxaan leenahay iibka adag rubuca hore ee sanadka.
Shirkaddu waxay saxiixday rubuckeedii koowaad ee ugu xumaa taariikhda 2019. Sidii ay u suurtagashay in la ogaado, Sony waxay iibisay 1,1 milyan oo telefoon adduunka oo dhan saddexda bilood ee ugu horreeya sannadkan. Weligood weligood adduun yar bay iibiyeen. Muunad cusub oo xilligiisii ​​xumaa.
In kasta oo ay tahay in sidoo kale maskaxda lagu hayo in shirkadda ayaan wax telefoon ah ka bilaabin suuqa rubucii koowaad ee sanadka. In kasta oo MWC 2019, oo la qabtay dhammaadkii Febraayo, shirkaddu waxay soo bandhigtay moodooyinkeeda cusub, Xperia 1 y Xperia 10Telefoonnadan midkoodna looma sii deynin weli dukaamada.
Markaa waa suurtagal in markii noocyadan cusub ee Sony ay suuqa soo galaan iibku wuu kordhi karaa. Si kastaba xaalku ha ahaadee, shirkaddu waxay dajin doontaa hadafkeeda ugu yaraan inay ka badato iibkii sanadkii hore, oo ah kii ugu xumaa ee taariikhda soo mara ilaa hadda. Markaa waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la arko haddii taleefannadan la cusbooneysiiyay ay wax ka beddelaan tan.
Dhinaca kale, ha meesha ka saarin in Sony ay ku dhawaaqeyso ka bixitaankeeda suuqyada kale, sida ku dhacday Latin America. Shirkaddu waxay doorbideysaa inay diiradda saarto suuqyadaas ay sida wanaagsan wax ugu iibiyaan. Marka waxaa laga yaabaa inay isbedelo dhacaan bilahaan. Ujeedada shirkaddu waa inay joogto suuqa taleefannada markasta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Sony » Sony waxay saxiixday iibkeedii ugu xumaa rubuc hore
Huawei wuxuu marka hore bilaabi doonaa 100.000 oo unug oo ah Huawei Mate X
Samsung Galaxy Note 10 Pro wuxuu gaari doonaa 4.500 mAh